Fadlan la soco: Sababo la xiriira saameynta coronavirus, McKnight wuxuu hirgaliyay muddo seddex bilood ah oo dheeri ah oo loogu talagalay dhammaan warbixinnada deeq-bixinta. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu jiro xaaladdan aan horay loo arag, deeq bixiyayaashu waxay la hadli karaan xiriirkooda barnaamijka si ay u weydiistaan wax ka beddelka suurtagalka ah ee heshiisyada deeqdooda, sida ujeedka deeqda ama qaab dhismeedka waqtiga. Akhriso Jawaabta McKnight coronavirus ku socota deeq-bixiyeyaashayada CCRP.
Ujeedada Cilmi-baarista Iskaashatada Wadajirka ah: Hagaajinta helitaanka cuntada maxaliga ah, ee joogtada ah, nafaqo leh iyada oo la adeegsanayo cilmi-baaris ku salaysan iyo wadaag aqooneed oo ay la leeyihiin beeraleyda yaryar, hay'adaha cilmi-baarista, iyo ururada horumarinta.
Barnaamijka Cilmi-baarista Xoolaha ee Iskaashatada Cunnada (CCRP) wuxuu u shaqeeyaa si loo hubiyo aduunka oo dhan si ay u helaan cunto nafaqo leh oo si joogta ah u soo saara dadka maxalliga ah. Waxaanu diiradda saari doonaa 12 dal ee laba qaaradood oo faqiirnimada iyo cunto-darradu ay abuurtay "dhibco kulul".
International News, Fikradaha, iyo Khayraadka
Ku-deeqeyaashayada CCRP: Jawaabta McKnight ee Coronavirus
Sidee Cilmi-baarista Agroecologia u Kordhineysaa Sinnaanta Caalamiga ah iyo Xallinta Xalka Cimilada
By Jane Maland Cady Noofambar 2019